မိုးစက်ပွင့်: ဥယျာဉ်ထဲမှ ပန်းကလေးများ
Posted by Me at 10:23
Anonymous 15 April 2011 at 12:13
ဒွေးသီးတဲ့ ဟိဟိ ဟုတ်လည်းဟုတ်ပဲနဲ့ :P
kiss me quick နဲ့သစ်ခွတွေတော့အမေကြိုက်လို့ စိုက်ထားတယ်
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! 15 April 2011 at 12:45
အဖြူရောင်နတ်သမီး 15 April 2011 at 13:58
အဲဒီ တရုတ်နှင်းဆီ(၉နာရီ) ပန်းကိုတွေ့ရင်စိတ်နာလွန်းလို့...
ပန်းပင်ရောင်းတဲ့သူတွေရဲ့ဈေးဘန်းထဲမှာ ရောင်စုံပွင့်နေကြတဲ့ ၉နာရီပန်းပင်လေးကို ဝယ်စိုက်မိပါတယ်..
ကိုယ့်လက်ထဲလည်းရောက်ရော မပွင့်တော့ပဲနဲ့ အပင်ပဲအရှည်ကြီးဖြစ်လာတယ်..း(
Shinlay 15 April 2011 at 21:55
ပန်းတွေလိုပဲ လှပတဲ့ မိုးစက်လေး မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။
Iora 16 April 2011 at 01:55
လင့်လေးချိတ်ပါရစေနော်. သဘောကျလို့ ပါ။
အပြုံးပန်း 16 April 2011 at 05:56
Moe Sett Pwint 16 April 2011 at 08:30
စူးနွယ်... မီးက ဂျဂါး မပီသေးလို့ပါကွယ် :D
ညီမအိန်ဂျယ်.... ဟောတော့ ရေ ရေတွေ ရွှဲကုန်ပြီ.. ပြန်ပက်ဦးမယ် ကဲ လာလေ့ ဗွမ်းး)))))
နတ်သမီးလေး.... ကိုးနားရီပန်းက နွားချေး အရမ်းကြိုက်တာ၊ ထည့်ကြည့်ပါလား...
မမရှင်လေး... ချစ်လျှင်လှ၏ ဆိုတာ အမှန်ပဲနော်၊ ချစ်သောမျက်စေ့နဲ့ကြည့်တော့ ဘဲရုပ်ဆိုးမလေးလဲ လှသွားတာပေါ့း))) ဒွေးသီးကတော့ (ဒွေးသီး- မင်းသား ဒွေးကို ဂုဏ်ပြုထားသော အမည်သစ်)၊ ညီမတို့ ဂျပ်ဆင်ဘေးမှာ အဲဒီ အသီးသုပ် ပါဆယ်ဆွဲပြီး ၀ယ်စားနေကျလေနော်
Lora ရေ.... link တာကို ၀မ်းသာစွာ လက်ခံပါတယ်၊ တို့လည်း နောက်လာခဲ့ပါဦးမယ်
အပြုံးပန်း ..... စက္ကူပန်းက (အပြုံး ရိုက်ထားတဲ့ပုံထဲကလို) အလည်ဝတ်ဆံလေး မပွင့်သေးဘူးနော်။ (ဒွေးသီး) အဲဒီအသီးက ပန်းတွေကြားထဲ ၀င်ရှုပ်နေသလိုပဲ၊ ဒါပေမဲ့ စားရတာ တို့ကြိုက်လို့း))))))
ရွှေညာသားလေး 16 April 2011 at 21:59
လာလည်သွားပါတယ်ဗျာ ပန်းလေးတွေလှတယ်။ ဒွေးကသေပြီထင်တာ ဒီရုံးမှာ သွားပြီး ဒွေးသီး သီးနေတာကိုး...နောက်တာပါဗျာ....စိတ်ဆိုးရဘူးနော်...:P:P:P ကပ်ကြေးညှပ်ပန်းဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရွာမှ ခုနစ်ထွေပန်းလို့ ခေါ်ကြတယ်...နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေ....
လသာည 21 May 2011 at 17:51
ပန်းလေးတွေလည်း လှ၏ နာမည်လေးကလည်း ဆန်း..၏
ဒွေးသီးဖြစ်ပါတယ်.. အဲလေ လသာညဖြစ်ပါတယ်း)))
smk 25 June 2011 at 08:57
ကျနော့ ချစ်သူ က ပြောဘူးတယ် .. သူတို့ အဲဒီ အသီး ကို ပြည်တော်သာ သီး လို့ ခေါ်တယ် တဲ့
maimai4April 2012 at 22:57